" कञ्चनजंगा News " – Page2– " सधैँ अटल "
एमाले नेतृ करिस्मा मानन्धर यानिकी सूर्य कुमारीले रोजिन् बालेन्द्र, लेखिन् मर्मस्पर्शी शब्द
No Comments on एमाले नेतृ करिस्मा मानन्धर यानिकी सूर्य कुमारीले रोजिन् बालेन्द्र, लेखिन् मर्मस्पर्शी शब्द
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी नेतृ एवं अभिनेत्री करिस्मा मानन्धरले बालेन्द्र सालाई बधाई दिनु भएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनताको रोजाई सर्वोच्च हुने भन्दै उहाँले बधाई दिनु भएको हो ।
अभिनेत्री मानन्धरले काठमाडौं महानगरपालिकामा विजयी मेयर बालेन्द्र साह र उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई बधाई दिदैँ यस्तो बयान दिनुभयो ।
साह र डङ्गोल काठमाडौं बासीको रोजाई भएको उहाँको भनाई रहेको छ । उहाँका अनुसार सानो दल ठूलो जनमतले अचानक अगाडि आउने घटनालाई , जनताले लोकप्रिय र विकास् उन्मुख पार्टी रोजेछ भन्न सकिन्छ ।
तर यो स्थानीय चुनावमा त्यस्तो भएको होईन् । यो चुनावको परिणाम मिश्रित भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन गरेर आंशिक रूपमा पहिलो , नेकपा एमाले एक्लै भएपनी दोस्रो र गठबन्धनका अन्य दल नेकपा माओवादी तेस्रो , नेकपा एस , र अन्य दल जनताको चाहाना नयाँ उम्मेदवारहरु तर्फ झुकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँको फेसबुक स्टाटस हेर्नुहोस्
लोकतन्त्रमा जनताको रोजाइ सर्वोच्च हुन्छ । जनतको मत तेता तर्फ आकर्षित हुन्छ जाँहा जनताले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्छन् । काठमाडौ माहानगर वासी जनताको रोजाइ , हुनै लागेका नयाँ मेयर बालेन साहलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना छ ।
हुनै लागेकी , उपमेयर नेकपा एमाले कि नेत्री क. सुनिता डङ्गोललाइ बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।
मेरो बिचारमा सबै लोकतान्त्रिक बिचार राख्नेले नयाँ पुस्ताले गरेको यो उर्जासिल प्रयासलाई असाध्यै सकारात्मक तवरले लिनुपर्छ । युवाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो लिन थाल्नु सकारात्मक परिवर्तनको सुरुवात हो ।
सबै दलहरूको चुनावी प्रयास भनेको आफ्ना नीति योजनाहरु जनता सामु पुर्याउनु र आफ्नो पार्टीलाई अत्याधिक मतले बिजयी बनाउनु नै हुन्छ ।
जनमतको क्रममा ठुला दल अत्यन्तै स्यानो भएर खुम्चिनु ! अनि सानो दल ठूलो जनमतले अचानक आगाडी आउने घटनालाई , जनताले लोकप्रिय र विकास् उन्मुख पार्टी रोजेछ भन्नसकिन्छ ।
तर यो स्थानीय चुनावमा तेसो भएको होइन । यो चुनावको परिणाम मिश्रित छ। पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस गठबंधन गरेर आंशिक रूपमा पहिलो , नेकपा एमाले एकलै भएपनी दोस्रो र गठबंधनका अन्य दल नेकपा माओवादी तेस्रो , नेकपा एस , र अन्य दल ।।।
जनताको चाहाना नयाँ उम्मेदवारहरु तर्फ झुकेको छ । धरानमा हर्क साम्पाङले जित्नु , विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । हरेक पार्टिले यो सत्यलाई मनन् गर्नुपर्छ ।
म आफू पनि नेकपा एमालेको पक्षधर भएकोले केही मनमा लागेको कुरा राख्दै छु, यो एउटा नागरिकको हिसाबले सुझाव पनि राख्दै छु । किनभने नागरिकले निष्पक्ष विश्लेषण गर्दछ।
नयाँ सदस्य भएको कारण आन्तरिक कुरा कम थाहा हुनसक्छ !! तर पार्टीको गरिमा बढेको हेर्न चाहाने भएकोले र यो मुलुकको विकास गर्न एमाले पार्टी सक्षम भयेको आफ्नो विश्वासले अनि आफ्नो कार्यकालमा एमालेको सरकारले गरेको कामबाट प्रभावित भएर पार्टीमा आबद्ध भएको कारण यो कुरा राख्दै छु ।
पार्टीले गहन प्रकारले विगतमा भएका त्रुटी र अप्ठ्यारोमा गरिएको निर्णयबाट पार्टीलाई परेको असरको बारेमा निर्मम र निस्वार्थ समिक्षा गर्नुपर्छ होला र तेसलाइ सच्याएर अगाडि जानुपर्छ ।
किनभने विगतमा भएका घटनाक्रमले गर्दा लोकप्रियता र परिस्थिति निकै राम्रो हुदाहुदै पनि धेरै ठाउँमा आफ्नैहरुबाट अन्तरघातका कारण यथोचित सफलता हासिल गर्न सकिएन ।
धेरै नयाँ पुस्ताका अनुहारलाई अगाडि सार्नु पार्टीको सबल पक्ष रह्यो । मुख्य नेतृत्वले तल सम्मको स–साना कामकारबाहीमा थोरै भए पनि जानकारी लिनुपर्छ होला !
कतै कतै उमेदवारहरुको छनोट पो गलत भयो कि !! समय परिवर्तनशिल छ , हिजो जे थियो आज छैन ,आज जे छ भोलि हुदैन । तेसैले हिजोको एमालेलाई , आज र भोलि उस्तै सदाबाहार बनाउन हामिले आफुलाइ परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
आउदो मुख्य चुनावमा नेकपा एमालेलाई पहिलो नम्बरमा पुर्याउनु पर्छ । चुनावमा एमालेका नेताकार्यकर्ताले जुन उर्जाका साथ दिनरात नभनेर मेहनत गरेको देखे त्यसबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाए । बिजय हासिल गर्नुहुने सम्पूर्ण कमरेडहरुमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ✊ अन्त्यमा हामी जे गर्छौ राष्ट्रिय हितको लागि गर्छौ ।
यस्तो कानूनका कारण बालेनले राजनीतिक दल खोलेमा वा दलको सदस्यता लिएमा पद नै जान्छ
No Comments on यस्तो कानूनका कारण बालेनले राजनीतिक दल खोलेमा वा दलको सदस्यता लिएमा पद नै जान्छ
काठमाडौं । बालेन (बालेन्द्र) साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी हुने पक्का भएसँगै विभिन्न अड्कलवाजी समेत गर्न थालिएको छ । बालेन के विजयी भएपछि अर्को दलमा जान्छन् ।
या उनले अर्को पार्टी खोल्छन् ? सबैको मनमापनि लागेको होला । उनले बेला–बेलाका सामाजिक सञ्जालका पोष्टमा बालेन एक्लै हैन यो अभियान हो भनिरहँदा धेरैले बालेनले पार्टी खोल्ने कल्पना समेत गरेका छन् । तर विद्यमान कानूनका कारण त्यो सम्भव छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ मा ‘दल त्याग’ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले दल त्याग गरेमा उक्त पद दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने’ व्यवस्था छ ।
त्यसका लागि तीनवटा शर्तहरूमध्ये कुनै एउटा शर्त आकषिर्त भएको हुनुपर्छ ।
पहिलो, सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजिनामा दिएमा, दोस्रो जनप्रतिनिधिले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा आफैंले वा आफू समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था ऐनको दफा ३२ मा छ ।
संवैधानिक व्यवस्थामा समेत यो विषय समेटिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिका र २१६ मा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दुवै ऐनको उपधारा ८ मा स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष अनि वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानमा दल त्याग सम्बन्धि वयवस्था छैन ।
तर राजनीतिक सहमतिका आधारमा दलसम्बन्धी ऐन २०७३ जारी गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३१ मा ‘दल त्याग गरेमा’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्था थपिएको हो ।
संघीय र प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा संविधानमै व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको हकमा यो व्यवस्था मिल्दो नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउनुहुन्छ ।
तर कानूनमा व्यवस्था भएपछि कार्यन्वयन गर्न आयोग बाध्य हुने उहाँको भनाई छ । विधायिकाले कानून बनाउँने हो । कानून बनाएपछि कार्यन्वयन गर्ने निकायले गर्नुपर्नेछ ।
‘ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सरसर्ती हेर्दा एउटा दलमा आवद्ध भई निर्वाचन चिहृन लिएर जनमतको भरमा जितेको जनप्रतिनिधिले दल परित्याग गरेमा पद समेत जाने विषय स्वाभाविक र उपयुक्त भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भनाई छ ।
यसैले बालेन साहलेपनि लिएको चुनाव चिहृन भन्दा फरक पर्ने दल रोजेमा वा बनाएमा पद स्वतः खारेज हुनेछ । अर्थात स्वतन्त्रलाईपनि कानूनले एउटा दल जस्तै मानेको छ यही कानून आकर्षित हुनेछ ।
No Comments on सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेर निर्वाचन जित्यो : ओली
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले नभएको बताएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा नभएको बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमा भनिएझैं निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन स्वच्छ हुन सकन, धाँधलीरहित हुन सकेन । उम्मेदवारलाई थुनेर, बुथ कब्जा गरेर, सत्तापक्षले बुथ कब्जा गर्दा प्रहरी निरीह भएर हेरेको छ । बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिएका छन् । उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ । उम्मेदवारका घरका स‍दस्य घाइते भएका छन् । शान्तिपूर्ण भयो सबैतिर ?’
राजनीतिमा उथलपुथल: नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड, मिति समेत तोकियो !
No Comments on राजनीतिमा उथलपुथल: नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड, मिति समेत तोकियो !
स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको पूरा परिणाम नआउँदै सत्ता गठबन्धन भत्किन लागेको चर्चा पनि सुरु भएको छ।
अहिलेको निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी केन्द्र उत्साही बनेको छ। उसले ०७४ को निर्वाचनभन्दा आफूलाई सुधारमात्रै गरेन, देशको सत्ता राजनीतिको निर्णायक शक्तिको रुमा पनि स्थापित गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम सुखद् रहेको प्रतिक्रिया दिईरहेका छन्।
तर, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका केही नेताहरुले भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चुनावमा इमानदारिता नदेखाएको गुनासो भने गरेका छन्। एमालेले भने यसपटकको निर्वाचनमा ६ वटै महानगर गुमाउने अवस्था छ। आगामी मंसिरसम्म संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको चर्चा पनि चलेको छ। एमालेको नेतृत्व तहबाट नै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको माओवादी केन्द्रनिकट उच्च स्रोतको दाबी छ।
तर, दाहालले भने एमाले नेतृत्वलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि अहिलेको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेको जवाफ दिएका छन्। उनले पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउनको लागि अहिले षड्यन्त्र भैरहेको पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु नहुँदै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले पनि दाहाललाई यो गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन?कतै कांग्रेसलाई धोका दिने हो कि? भन्दै गठबन्धनको भविष्यबारे सुनिश्चितता खोजेका थिए। भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा कांग्रेसका नेताहरुले दाहालसामू यस्तो प्रश्न गरेका थिए।त्यतिखेर पनि दाहालले आफू गठबन्धनप्रति ईमानदार बनेको भन्दै विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए।
अहिले एमाले नेतृत्वबाट दाहाललाई संघको चुनाव गराउनेगरि प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएपनि दाहाल भने गठबन्धन तोडेर त्यस्तो प्रस्ताव स्विकार गर्ने पक्षमा छैनन् उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन हुने दाबी गर्दै आएका छन्। हालै पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा पनि दाहालले यही दाबी गरेका थिए।
कालिकोटमा दोहोरो गठबन्धनका बाबजुद काँग्रेस दुई पालिकामा सीमित, एमाले शून्य माओवादीको वर्चश्व रहेको कालिकोट जिल्लामा स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसले दोहोरो गठबन्धन गरेको थियो । यद्यपि काँग्रेस ९ मध्ये दुई पालिकामा सीमित भएको छ ।
कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह जिल्ला कालिकोटमा काँग्रेसले केही पालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र केही पालिकामा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो ।सत्तारुढ गठबन्धनबीच आपसमा तालमेल गर्ने, नभएमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने तर गठबन्धन घटक बाहिर तालमेल नगर्ने सहमति भए पनि काँग्रेसले एमालेसँग समेत यो जिल्लामा तालमेल गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले पनि एमालेसँग तालमेल गरेको थियो ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले नौवटा स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र ६ मा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र ३४ वडा वडामा जित हासिल गरेको थियो ।
दोस्रो शक्ति एमालेले तीन पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र २६ वडामा जितेको थियो । यस्तै नेपाली काँग्रेसले एउटा पालिका र १६ वटा वडामा जितेको थियो ।
यो पटक भने एमाले–काँग्रेसको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको छ । माओवादी केन्द्रले वडामा आफ्नो प्रभाव बढाए पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा २ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष गुमाएको छ ।
माओवादी केन्द्रले यस पटक पनि पाँच वटै पालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने चारवटामा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र ४८ वटा वडामा आफ्नो वर्चश्व कायम गरेको छ । यस्तै काँग्रेसले दुई वटा पालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने दुई वटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजयी प्राप्त गरेका छन् ।सत्तारुढ गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय संयन्त्रले यो जिल्लामा तालमेल गरेर जाने सहमति गरे पनि जिल्लामा तालमेल हुन सकेन । नौ मध्ये शुभकालिकामा काँग्रेस–माओवादीबीच तालमेल थियो भने काँग्रेसले गठबन्धनको सर्कुलर विपरीत तिलागुफा नगरपालिकामा एमालेसँग तालमेल गरेर माओवादीलाई पराजित ग¥यो । यस्तै महावै गाउँपालिकामा एमाले–माओवादीबीच तालमेल भएको थियो ।
एमालेले सत्तारुढ घटकका काँग्रेस र माओवादीसँग आफ्नो स्वार्थ अनुकूल विभिन्न पालिकामा छुट्टाछुट्टै तालमेल गरे पनि कुनै स्थानमा वर्चश्व जमाउन सकेन ।
कालिकोटमा नेकपा एमाले विभाजनको असर नराम्रोसँग देखिएको छ । यहाँ एमालेले पाउने अधिकांश भोट नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाएको छ । यद्यपि एकीकृत समाजवादीले पनि जित हासिल गर्न भने सकेन ।
०७४ मै एमालेबाट जनप्रतिनिधि भएका धेरैजसो नेता नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनीहरुले एमालेको भोट काटेका छन् । समाजवादीकै नेता कमल शाहीले खाडाचक्रमा एमालेलेलाई पराजित गरे । शाही स्वतन्त्रबाट लडेका थिए । एमालेले जिल्लाका तीन पालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा जितेको छ ।
No Comments on यस्ता पो मेयर त ! हर्क साम्पाङले भर्खरै धरान २० का नागरिकको लागी गरिदिए एति ठुलो फैसला..
यस्तै भर्खरै उनले “धरान २० का उपभोक्ताहरुलाई विष्णुपादुका क्षेत्र मै विद्युतको बिल तिर्न पाउने गरी घुम्ती काउन्टर बनाउने निर्देशन दिएको छु ! छिटै यो सेवा प्राप्त हुनेछ ! ५ घण्टा हिँडिरहन पर्नेछैन ! – जय धरान !” भनि आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस पोष्ट गरे जुन विष्णुपादुका क्षेत्रका जनताको निम्ती ठुलो राहत मिल्ने देखिन्छ।
बालेन ६० हजार मत नजिक हुँदा सुनिताको ६६ हजार नाघ्यो, दुवैकाे जित सुनिश्चित
No Comments on बालेन ६० हजार मत नजिक हुँदा सुनिताको ६६ हजार नाघ्यो, दुवैकाे जित सुनिश्चित
काठमाण्डाै – काठमाण्डौ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ‘बालेन’को मत ६० हजार नजिक पुगेको छ । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार महानगरको १ लाख ८३ हजार ६ सय ७९ मत गन्दा साहले ५९ हजार १ सय ४९ मत पाउनु भएको छ ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ३७ हजार ५ सय ४२ मत पाउनु भएको छ । एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले ३७ हजार २ सय १८ मत ल्याउनु भएको छ ।
यसैबीच, उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डंगोलले सबैभन्दा धेरै मत पाउनु भएको छ । उहाँले अहिलेसम्म ६६ हजार ८ सय ७८ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले २३ हजार ३१ मत पाउनु भएको छ । मेयरमा बालेन र उपमेयरमा सुनिताले मतगणना गर्न बाँकी मत सङ्ख्या भन्दा धेरैकाे अग्रता लिइरहेकाले दुवैकाे जित सुनिश्चित छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)को जित सुनिश्चित भएको छ । युवा उमेरका बालेन अब आगामी पाँच वर्षका लागि काठमाडौं महानगरको पिताका रूपमा रहनेछन् । बालेनले प्रमुख दल कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र एमालेका केशव स्थापितलाई भारी मतान्तरले पछि पार्दै आफ्नो जित सुनिश्चित पारेका हुन् ।
वर्षौंदेखि राजनीतिमा होमिएका नेतृत्वका लागि बालेनको यो जित ठूलो सवक र झड्का हो । बुधबार रातिसम्म बालेन्द्र साहले ५५ हजार ७ सय ७७ मत ल्याएका छन् भने नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहको ३५ हजार ३ सय ७१ मत रहेको छ । यस्तै, नेकपा एमालेका भेट्रान उम्मेदावर मानिएका केशव स्थापितको ३४ हजार ६ सय २६ मत रहेको छ । उनी तेस्रोमा पुगेका छन् ।
बालेनको उम्मेदवारी घोषणादेखि नै समर्थमा उत्रिएका कलाकार निर्मल शर्माले बालेनको जित सुनिश्चित भएपछि अब विकास निर्माण हेर्न देख्न अनि भोग्न पाइयोस् भनेर प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूको मात्र होइन आमयुवाले बालेनबाट आशा राखेका छन् । मतगणना सुरु भएदेखि नै सभागृहमा उपस्थित बालेन समर्थकले नाचगान, कविता वाचन गरेर माहोल तताइरहेका छन् । बालेन त्यो भिडमा बेलाबेलामा उपस्थित भएर कसैलाई पनि गाली नगर्न भनिरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
No Comments on अब जन्मिन्छन बालेन जस्ता हजारौं उम्मेदवार !
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन साहले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा पुराना र परम्परागत प्र्रतिष्पर्धी दलहरुले सायदै सोचेका थिए होलान् किउनले आफूहरुलाई टक्कर देलान् भनेर ।
सबैले गठबन्धन र एमालेबीच भिडन्त हुने आँकलन गरेता पनि ति आँकलनलाई गलत सावित गर्दै बालेन विजयको मुखमा आइपुगेका छन् । यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले शीर्षस्थ दलका नेताहरुलाई राम्रो सवक सिकाए ।
सधै चुनावमा विभिन्न आश्वासन दिएर कार्यन्वयन नगर्ने दलका नेताहरुको प्रवृत्तिबाट आजित आम नागरिकले यो चुनावमा भने नेताहरुलाई गतिलै झट्का दिए ।
चुनावी प्रचारप्रसारमा राम्रै माहोल बनाएका एमाले कांग्रेस लगायतका ठूला दलहरुले परिणाम भने त्यस अनुरुप ल्याउन सकेनन् । घरदैलो कार्यक्रममा त्यत्रा मानिस कहाँबाट ल्याए त्यो उनै दल र दलका नेताहरु जानुन् । तर वास्तविकता भने चुनावको मत परिणामले छरस्प्रष्टै पारिदियो । स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहमाथि आममानिसले गरेको यो विश्वास हेर्न लायकै थियो ।
ठूला भनिएका दलहरुलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र युवाहरुले चुनावको मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पारेसँगै यसले काठमाडौँ महानगरपालिकाबासीले परिवर्तन चाहेकोप्रष्ट हुन्छ ।
महानगरवासीले परिवर्तनको प्रकृति अनुसार नै परिवर्तनको विगुल फुकेको विज्ञको बुझाई छ । महानगरपालिकामा मात्र नभई आफ्नो विरासत जमाएर बसेका नेताहरुलाई स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरुले भारी मतान्तरले पराजित गरेको यथार्थ देशैभर चर्चाको विषय बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब पनि नेताहरुले जनताले जे भने पनि पत्याउँछ र आफैले भनेको मात्र मान्छ भनेर सोच्छन् भने त्यो नेताहरु आफै परास्त हुँदै जानुको संकेत भएको कतिपयको धारणा छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेनले जित्ने निश्चित भइसकेको छ । दलीय व्यवस्था भएको देशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अन्य दलका नेताले सहयोग गरेको हालसम्म देखिएको छैन ।
महानगरबासीका लागि केही गर्छु भनेर मैदानमा आएका बालेनलाई सबैबाट साथ सहयोग अवश्य चाहिन्छ, नै । यस्तोमा बालेन एक्लैले महानगरवासीको चाहाना अनुसार काम गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । दलका झुण्डबाट बालेन नडराउने, नगरसभालाई सञ्चार मैत्री र पारदर्शी गराई अरुले असयोग गर्ने अवस्था नै सृर्जना गर्न नदिने समर्थकको दावी छ ।
महानगरबासी बालेनबाट व्यक्तिगत केही चाहदैनन् । समाजमा रहेको वेथितिको अन्त्य गर्दै काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहरमा रुपान्तरित गरेको हेर्न चाहन्छन् । साथै, राजधानीबासीले दैनिक भोग्नुपरेको समस्याको समाधान भए उनीहरुलाई पुग्छ ।
ठूला दलको दबदवा रहेको देशकै राजधानीमा विना कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका बालेनलाई महानगरबासीले ठूलो विश्वास गरे । जुन विश्वासमा उनी मेयर बन्ने पक्का नै भइसकेको छ । अब यो विश्वासलाई मर्न नदिन उनको आगामी यात्रा केन्द्रित होला रु त्यो भने समयसँग्र प्रष्ट हुने नै छ ।
No Comments on बालेनले जिते राजनीति नै छाड्ने घोषणा गरेका आङकाजी अब के गर्लान् ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं / काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र (बालेन) शाहले लोकप्रिय मत ल्याएपछि राजनीतिक दल परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै विभिन्न विश्लेषण सुरु भएका छन्।
बालेनले जिते राजनीति नै छाड्ने घोषणा गरेका आङकाजी शेर्पा मिडियामा आएका छन । राजावादी बाट परिचालित बालेन शाहले जित असम्भब रहेको बताए । बालेनले जिते सिस्टम नै फेल हुनेसमेत उहाँको बुझाइ छ। थप जानकारीको लागी हेर्नुहोस् भिडियो सामाग्री
राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको नेतृत्व गरेपछि राप्रपाले यो स्थानिय तहको चुनावमा राम्रो स्थिती बनाएको छ । देशभरका केही महत्वपूर्ण नगरपालिका हात पारेको छ भने धेरै वडाहरुमा जित निकालेको हो । यसैबी, राप्रपाबाट नगरप्रमुख बनेका एक युवा उम्मेवारले दिएको बयान लाखौं करोडौं खर्च गर्ने उम्मेवारलाई महाज्ञान बनेको छ ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा ३३ वर्षीय युवा अजय थापाले मेयर जितेर धेरैलाई आश्चर्यमा पारेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दलहरूको दबदबालाई पन्छाउँदै थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मेयरमा बाजी मारेका हुन्। उनले एमालेका महादेव पोखरेललाई ४७४ मतान्तरले पराजित गरेर ५ वर्षका लागि शिवराजको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा पाए। थापा २०७४ सालमा पनि राप्रपाबाट शिवराज नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार बनेका थिए।
त्यसबेला एमालेका नेत्रराज अधिकारी मेयरमा विजयी भएका थिए। संघीय समाजवादी फोरम दोस्रो स्थानमा थियो। त्यस बेला कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै थापा तेस्रो स्थानमा थिए। मेयरमा पराजित भएपछि उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरे। २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा थापा कपिलबस्तु ३ ‘क’ मा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए। तर पराजित भए।